Daawooyinka sida khaldan loo isticmaalo oo kusoo badanaya moqdisho | Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed
Daawooyinka sida khaldan loo isticmaalo oo kusoo badanaya moqdisho
Muqdisho(SONNA):-Magaaladda Muqdisho ayaa waxaa ku soo badanaya dhalinyaradda isticmaasha daawooyinka xanuun baabi’iyaasha ee “Tramadol iyo Pethidine” labadan daawo ayaa inta baddan waxaa la sheega in dadka u isticmaalaan si ay uga helaan deganaansho nafsadeed iyadoo inta qof jirkiisa ay ku jirto uu dareemayo nafis, balse ay ku lamaan tahay halis caafimaad darro oo weyn.
Labaddan daawo ayaa waxay dhakhaatiirtu u isticaamaalaan asalkooda xanuun baabiye sida dadka gala qaliinadda culus, dadka ay la soo daristo dhaawacyadda khatarta ah si qof ka looga yareeyo inuu dareemo xumad daran, balse taas bedelkeeda Dhalinyaradda Mogadisho ayaa u isticmaasha maandooriye ahaan tan oo saamaxaysa inay kordhaan dadka ku dhex nool maandooriyayaasha noocyadooda kale duwan gaar ahaan dhalinyarda Soomaaliyeed.
Muddooyinkii u dambeeyey waxa magaalada mogadisho aad laga dareemayaa tiradda dhalinyaradda isticmaasha daawooyinka oo sii kordhaysa tani oo khatarta ku ah caafimaadka guud ee dalka iyo mustaqbalka dhalinyaradda sidoo kale na sababi karta ficilo amni darro oo ay ku kacaan dhalinyaraddani xiliyadda ay waayaan daawada,” Tramadol iyo Pethidine.” oo labaduba ah xanuun baabi’iyaal awoodoodu aad u sareyso ayaa qofka caafimaadka qaba ka dhigi karta inuu naftiisa halis galiyo.
Dhibaatooyinka kale ee ay sababaan labaddan daawo ayaa waxa ka mid ah in Dadka isticmaala ay la qabsadaan daawadan taas ayaan na sababta in aysan waxaa ka tari karin dhammaan xanuun baabi’iyayaasha kale xiliyadda uu qofka ugu baahdo xaalado caafimaad oo la soo darsa.
Qaar ka mid ah wadooyinka magaaladda waxaa aad ku arkeysa haraadiga daawooyinkan oo dadsan hareerah wadadda taas oo muujinaysa calaamadaha muujinaya isticmaalka Pethidine iyo Tramadol iyadoo ay dhici karto in ay faafiso Cuduradda faafah ee lagu kala qaado cirbadah la isticmaalay ee goob aan loogu tala galin la dhigay kadibnaa muday qof kale oo aan ogayn.
Bahda caafimaadka ayaa ka muujisay digniino la xiriira halista laga dhexlo Tramadol iyo Pethidine oo ay badi isticmaalan da’yarta Soomaaliyeed taas oo ay ka dhaxli doonaan in ay la qabsadan daawada Pethidine iyo Tramadol oo aan ahayn mid dhaqtar u soo qoray ama uu u fasixin adeegsigeed.
Xuquuqda Qormadda Naciimo Shiino.
Previous articleTurkey: in ka badan 28 milyan oo qof oo qaatay talaalka COVID-19
Next articleCiidanka Xoogga dalka oo ka saaray deegaano ay ku dhuumalaysan jireen argagixisadda Shabaab
Ciidamada Xoogga dalka oo howlgal ku dilay xubno ka tirsan argagixisada Al-...
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka oo Galmudug ugu baaqay inay dhameystiraan...
C/raxman maxamed Ibrahim - October 22, 2021 0
Muqdisho (SONNA)- Xubnihi...